Ihu ihu na-abịa na Igwefoto Igwe Igwe Igwe - OMG Solutions
Nweta ihu ọma na-abịakwute ndị uwe ojii Body-Worn Cameras
Ihu iru nwere ike na-agbanwe nchekwa nke ọdụ ụgbọ elu anyị, ebe ọrụ anyị, na ụlọ anyị, mana na ndị mmanye iwu, ebe mmadụ nwere ike ịtụ anya ịchọta nnabata nke teknụzụ a ọhụụ ma dị ike, ọ dịbeghị njem. Mkpesa nke enweghị ike, iwu na-akwadoghị, imelara mmadụ ihe, na arụghị ọrụ abụrụla ihe zuru ụwa ọnụ. Mana ezigbo nsogbu dị na ya bụ ịchụpụ ngwaọrụ niile nke na-achịkwa ọnọdụ ihu ọma dị mkpa ka azụọ maka ezigbo ụwa. Ma, karịchaa, ndị na-ewu ihe gbasara teknụzụ dị mkpa iji rụọ ya nke ọma.
Ebu ụzọ nweta ihu ọma maka njirimara dị iche na njikwa nnweta, iji rụọ ọrụ n'ọnọdụ ndị a na-achịkwa iji gosi na mmadụ bụ onye ha kwuru na ọ bụ. Ugbu a igwefoto na-enyocha igwe mmadụ, na-atule ihu niile na-agafe na ndepụta elele. Nke a n'onwe ya nwere nsogbu na-eme ya. Ma mgbe enwere egwuregwu, gịnị ga-eme ọzọ? Kedu otu sistemu ga-esi nweta ogo data, ọnọdụ gburugburu ya na ọnụ ụzọ ntanetị? Kedụ ka ndị ọrụ ga - esi mezuo uche ha na teknụzụ gaa na nsonaazụ?
Site na mmakọ otu ugbu a, enwere ike inwe ọnya ga-ezuru iji chọpụta nsogbu ndị a. Ndị uwe ojii na-enyocha nnabata ihu niile, na-eleba anya n'okwu ikpe. A ka nwere ọrụ dị ukwuu a ga-arụ, mana azịza nke nsogbu mbughari a nwere ike ịbụ, n'eziokwu, n'ihu ha.
Ozi nke izu gara aga na ndị FBI na-anwale nnabata ihu ihu Amazon nwere ọkwa nwute dị iche iche site n'ụlọ ezumike nzuzo nke kpebiri mkpebi ihu na mmanye iwu bụ oge ọjọọ. Dị ka ọ na-eme, ọmụmaatụ FBI rụtụrụ aka ebe ọ ga-eji rụọ ọrụ teknụzụ ahụ bụ naanị ihe kachasị esemokwu a na-eche n'echiche: ịhapụ puku kwuru puku awa vidiyo e dere ede maka ọhụụ nke onye na-agbapụ Vegas, Stephen Paddock. Anyị nwere ndị nnọchi anya na ndị nyocha, asatọ kwa oge mgbanwe, na-arụ ọrụ 24 / 7 maka izu atọ na-aga na ndekọ vidiyo FBI Onye Nduzi Onye Nduzi Christine Halverson gwara nzukọ AWS na November.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmanye iwu na-eji njirimara ihu iji nyochaa ndekọ vidiyo edekọ, chekwaa oge na ịnwale, ọ na-esi ike karịa iji ya na ezigbo ụwa. Ihe mgbakọ na mwepụ nke na-elele onye na-ekiri ihe ọ bụla na mbara igwe ọha mmadụ megidere ọbụna obere elekere na-eme ka njirimara ihu na njedebe ya. Naanị sistemụ kachasị mma nwere ike ijikwa ya. N’ihi nke a, a ka nwere ụdị ihu adịchaghị mma nke eji eme ihe n’oge ọrụ. Mana nke ahụ ga-agbanwe.
Otu ike na-enyocha nhọrọ maka ihu ihu ihu bụ real Police Police na London. Commissioner Cressida Dick kwuru na afọ gara aga na ihu ihu na-adịwanye mma site na nkeji. Echere m na ọha na eze ga-atụ anya ka anyị na-eche maka otu anyị nwere ike isi jiri teknụzụ a ma hụ ma ọ baara anyị uru. Mana na onwa Dizemba, mgbe ndi uwe ojii Met-igwe ji ugbo elu kpochie ihe nlere na mpaghara Soho nke obodo iji lelee otutu ndi nke ekwo ekwo ekwo ekwo ekwo ekwo ekwo ekwo ekwo ha na ha. Onye isi ụlọ ọrụ Big Brother Watch kpọrọ ya mkpofu dị egwu nke oge ndị uwe ojii na nke ọha ma kwuo na ọ gafeela n'ihi na ndị uwe ojii tụfuru teknụzụ dị egwu a na emebi iwu.
N'ịghọta njiri mara nke teknụzụ ahụ, ndị uwe ojii Metric emeela ka o doo anya ịnụ ọkụ n'obi ya iji jikọọ. Ivan Balhatchet, onye ụzọ Met nke ndu maka nnabata ihu dị ndụ, kwuru na nkwupụta n’ọnwa Disemba na anyị ga-ejikọkwu ọnụ na ọtụtụ ndị dị iche iche, ụfọdụ ndị na-agbasi mbọ ike n’iji teknụzụ a iji gosipụta doo anya ma na-aga n'ihu na arụmụka ziri ezi, anyị kpọrọ oku. ndi mmadu n’otu n’otu n’otu nwere echiche ndi a na-ekwesighi ekwesi banyere uzo eji teknuzu ihu anyi emee ihe n’ebe a.
Na icheiche ihu n'anya, igwefoto ahụ yila ahụla ahụla mkpara. Ngwa ngwa vidiyo a na-eyi uwe uwe ojii na-eyi uwe ojii zuru ụwa ọnụ, na-enye njikwa njikwa, nchekwa ndị uwe ojii, na nkasi obi ọha. Igwefoto ahụ na-eyi n'ahụ na-edekọ vidiyo maka ịkwanye n'ime sistemụ nchekwa anụ ahụ ma ọ bụ igwe ojii. Igwe onyonyo eyi na-emegharị na-enyoghachi vidiyo na klaasị na-achịkwa. Ndị ọzọ na-ejikọ aka na ngwa agha iji rụọ ọrụ ndekọ vidiyo na-akpaghị aka. Ka ngwaọrụ mkpanaaka na-etolite, igwe ọhụụ nke igwefoto ahụ nke dabere na nyiwe Smartphone ka atọrọ ịkawanye mma. Nke a pụtara na teknụzụ abụọ ahụ ga-ezukọ. Nghọta ihu na igwefoto ahụ yire bụ ihe ọzọ a ga-ekwe nghọta. Ikwenye ndị uwe ojii na ndepụta nke ndị omempụ chọrọ, ndị nwere mmasị, ụmụaka na-efu efu, ndị okenye nwere nsogbu.… Ndepụta ahụ na-aga n'ihu.
N’ọnwa Disemba, ọ bụrụgodị na London rụrụ ụka na pọmpụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya, nnwale dị iche iche nke ihu mmadụ na-eme na obodo ụwa ọzọ ọtụtụ puku kilomita site na ha. Nnwale a emeghị isi okwu. Ejighi nkọwa ya. Mana ọ bụ nkọwa karịa maka etu ihu ga-esi rụọ ọrụ ihu. Dị ka ọ dị na London, ndị kachasị mma na-aga n'okporo ámá obodo nwere klọọkụ elekere nke puku mmadụ abụọ.
Mana nnwale a lere anya wee kwụsị, chọọkwa ihu ya na igwefoto ahụ, n'oge na-adịghị anya CCTV ma ọ bụ usoro onyunyo. Nnwale ahụ mere ụfọdụ ndị uwe ojii jiri ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ ozugbo wee n'otu ndepụta elele. N'ime awa nke mbụ, ejiri kamera ahụ jide mmadụ abụọ jidere na-eme ọhere dị mma. A na-elezi ndị a na-enyo enyo enyo ugbu a.
Kwụsị na ịchọ ya na-ese okwu. Ike ndị a na-agbanye na isi nke ndị uwe ojii site na nkwenye, na-ewelite ajụjụ gbasara imere ihe na ile mmadụ anya n’ihu na ikwenyesi ike. Na agbanyeghị nkatọ ahụ, ọ nwere ike ịba oke nke ọma, na-ewere ngwa ọgụ n'okporo ụzọ ma na-ejide ndị nwe ya. Ghọta nkwenye bụ akụkụ bụ isi nke usoro ahụ. Ihe ndi di na ndi Ikike ndi mmadu nwere ihu oma na a na-enyocha njirimara. Ndi amuru iwu, ndi mmadu nwere mmasi-ma amaghi ma ha amaghi, umuaka ndi umuaka na ndi okenye. Dị ka aka na ọgụgụ isi-eduga na frontline na-eme ka ndị uwe ojii na-eweta nnukwu uru. Ejidere naanị ụdị ndị ejidere na ndị e hotara na mbụ.
Ojiji ihu mmadụ na igwefoto ahụ na-enyekwa ihe nchebe megide ebubo nke ile mmadụ anya n'ihu. Enwere ike ịtọbe iwu iji zere ndị ọrụ na-enyocha ndị na-enweghị njirimara ihu, ọbụlagodi mgbe a kwụsịrị. N'ebe amamikpe ahụ kwụsịrị na ịchọpụta mpụ dị ala na mpaghara dị iche iche, njirimara ihu na igwefoto ahụ na-enye nguzozi. Ọ bụ ụdị nchekwa a ga - eme ka nnabata nnabata buru ibu.
Ihu ihu n'anya na igwefoto ahụ ga-emekwa nkwenye nke abụọ maka ọkụ sitere na ugbo ala na-enyocha na igwefoto CCTV. Gbaso egwuregwu egwuregwu mbụ, onye uwe ojii nọ n'ụkwụ na-agakwuru onye ahụ ma jiri igwefoto ahụ hụ ihe nlele nke abụọ, na-agba ọsọ na otu elekere ahụ. Naanị ma ọ bụrụ na enwere egwuregwu ga-ewega n'ihu. Na onwe ya, nke a bụ ihe nchebe nke ukwuu pụọ n'aka ndị a na-akpọ bogi positives. Ọ na-emekwa ka mmadụ nwee mkparịta ụka tupu emebie mkpebi ọ bụla na njide.
Isi ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi:
Njikọ nke ọtụtụ igwefoto na ndepụta otu nchere na nke ọ bụla na-emepe emepe nnukwu ohere nke ọgụgụ isi. Uru ọzọ nke a bụ ikike iji igwefoto ahụ nwere ọgụgụ isi nye ihe egwuregwu izizi, na-agbadata ekpuchido, ya na egwuregwu ahụ zigara ya na sistemụ igwe ojii nke yiri AI, ma ọ bụ injin ọzọ nke AI, ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ igwe AI, iji nye nzacha ziri ezi karịa tupu 'ewepụta' egwuregwu ọ bụla nye onye ọrụ. Ihe a niile ga - eme na sekọnd abụọ.
Nke a kwesịrị ịbụ afọ mgbe nhapụrụ ihu ga-akparị ebubo nke oke agbụrụ na enweghị isi. Ọ kwesịrị ịbụ afọ mgbe nkwanye ugwu na teknụzụ nke ihu niile abụghị otu. Ekwesịrị inweta ngwaọrụ dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche. Ntụle na-enweghị atụ nke igwe ndị dị otú a n'ọnọdụ a na-achịkwa kwesịrị inye ụzọ maka nhazigharị nke ndị ahịa na akaebe nke nsonaazụ ya.
Generationgbọ mbu nke igwefoto eji eyi na arụ ọrụ taa tụkwasịrị uche na ndekọ vidiyo vidiyo maka sistemụ njikwa. Ugbu a, Igwe eserese anụ ahụ 2.0 ga-eme ka elekwasị anya na ntinye vidiyo na-ebi ndụ, njirimara ihu, yana ngwaọrụ Edge-AI. Ọgbọ a nke igwefoto nwere ahụ ọzọ ga-esonye na ijeri ụzọ ndị ọzọ IoT ga-ahazi na netwọ 4G na 5G n'afọ ndị na-abịanụ. Na ngwụcha, ngwụcha egwuregwu ahụ ga-ahụ ụdị igwefoto eji eme ihe taa ka morph banye n'ime ekwentị ndị nwere ihu abụọ ga-esonye njide na nkwanye ikike na nyocha nke AI nke ọma na mmepụta data bara ụba nye onye isi ndị agha n'ihu. Oge nke naanị otu ihe ngosi igwefoto na-abịaru na njedebe.
Maka njirimara ihu, arụmụka ndị dị na 2019 kwesịrị ịdị gburugburu ojiji a na-achịkwaghị achịkwa ike maka ịzụ ahịa na nchekwa azụmahịa. AI na silicon etinyere na igwefoto IP dị ọnụ ala, enwere ike iru mmadụ niile. Ojiji nke teknụzụ a na mmanye iwu ga-akwụsị ịbụ nke na-agbawanye agba.
Yabụ, dị ka elele ihe gbasara uwe ojii, a ga - ahụ 2019 ka ọ bụrụ oge mgbanwe maka ihu ihu. Ule ga-akwụsị ije ozi. Ime nsonaazụ ga-arụpụta ihe. A ga-emeri esemokwu ahụ. Otutu ndi mmadu ga-ahọpụta nchekwa nke onwe na nchedo nke nzuzo.
Nzuzo 5640 1 Echiche Taa